Myanmar OA6: ခြားနားခြင်း
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 10:17 AM
ခွဲခြားရေးထားတာလေး အရမ်းကြိုက်တယ် မောင်ပွတ်ရေ ။ ဒါနဲ့ ဘလောဂ့်တိုင်း (၃) ကိုလည်း စောင့်မျှော်လျက်ပဲး)
ဟေ့ကောင် မွတ်ပေါင် ကောင်းလိုက်တဲ့ ပို့ကွာ။ မျှော်ရ ကျိုူး နပ်တယ်။
ကောင်းလှောင့်တေး ပွတ်ကလေးရေ ဂွတ်သကွာ
မောင်ပွတ် နှစ်ကိုယ်ခွဲဇာတ်လမ်းလေး မိုက်တယ်။ ခြားနားခြင်း ၂ လာဦးမယ်ဆို ထပ်မျှော်နေမယ်။
ကိုပွတ် မိုက်တယ် ...
ဒီကောင် က နည်းနည်း ဂျစ်ကန်ကန်နဲ့ ...
Mr.Pooh ရေ။ ခင်ဗျားရဲ့ ဒီအတွေးနဲ့ ဒီအရေးတွေကြောင့် ခင်ဗျားပို့စ်တွေကို ခိုက်တယ်ဗျာ။
သူတို့တွေက မိုက်တယ်တဲ့.. ဒါဆိုရိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်.. =)
ဟိုနေ့ကတည်းက ဖတ်လိုက်ပေမဲ့.. ဒီနေ့မှပဲ ကောမန့်ပွတ်ဖြစ်တယ်..
တကယ်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်ပဲ.. ဒါကြောင့် မြန်မာအိုအေစစ် ဖြစ်နေတာ..
blog times3ကိုလဲ စောင့်မျှော်လျှက်..
Sorry..Mr. Pooh…ကျွန်တော်အပေါ်ကရေးတာညံ့တော့ မရှင်းမရှင်းဖြစ်သွားတယ်..
တင်ပြထားပုံကလွန်ဆွဲနေတဲ့ပုံလေးလို့ ထင်ပါတယ်…နှစ်ကိုယ်ခွဲမဟုတ်ပဲ..စီနီယာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ပုံစံမျိုး နဲ့ ခြားနားခြင်းပြုနေတဲ့ပုံလေးဖက်ကသွားခံစားမိလို့ ပါ..
အတိုချုပ်ဆိုရင်တော့..ခြားနားခြင်းရဲ့ ဟိုဘက်ကို မသွားသင့်သလို..ခြားနားခြင်းရဲ့ ဒီဘက်မှာလဲတရားလွန်မနေသင့်ဘူးလို့ သုံးသပ်မိ တဲ့ အချက်ကလေးပါရင်ပိုပြည့်စုံသွားမလားလို့ ပါ..
မိုက်တယ်ဗျာ ကိုပွတ် များများရေးပေး
မောင်ပွတ်ရေ ... ငါစလုံးမျာနေတုန်းက ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်လေး မင်းအတွက် တင်ပေးထားတယ်။ လာဖတ်ဦးကွ ...။
မောင်ပွတ်ရေ ကဗျာလာဖတ်ဆိုလို့လာဖတ်တယ် ဒါပေမယ့် ရှာမတွေ့ဘူးကွဲ့ ကဲ ဘယ်လိုလုပ်ရမတုံး
ဒီအချိန်မှာ ဖတ်ရတော့ ကွက်တိပဲ။
ကွန်မန့် 20 တဲ့။ တကယ်တန်ပါတယ်။ 20 မက ရေးကြမှာပါ ဖတ်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်...။ ခြားနားခြင်း ကို နှစ်သက်စွာ ခံစားသွားပါတယ်။ ခြားနားခြင်း2ကို စောင့်မျှော်နေသလို 21 ခုမြောက် ကွန်မန့်ကို ရေးသွားပါတယ်။ ကိုမောင်ရင် ပြောသလို ဟိုဘက်အစွန်းထိ လွန်နေကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဘာပဲပြောပြော အရေးအသားတစ်ခုကိုတော့ ကြိုက်သွားပြီ။ အေးချမ်းစွာနေလိုတဲ့အချိန်မှာ အေးချမ်းစွာပဲ စောင့်မျှော်နေပါ့မယ် ... ဘလော့ဂ်တိုင်းမ်3ကိုပေါ့။
..ဒီနေ့ ပဲ ဝင်မိ..ဖတ်မိ..ဒီ တပုဒ်...သောက်ရမ်း ကြိုက်...
ဖြစ်ရပ်ခြင်း တူတော့...ထပ်တူ ခံစားလို့ရ..
y7Uv7a Your blog is great. Articles is interesting!
WRxQPX Wonderful blog.
costa rica tour company said...
c0bZju Hello all!